War Tips For Rokufambira On Zvitima | Save A Train
musha > Travel Europe > War Tips For Rokufambira On Zvitima
War ndeimwe kunakidza nzira kufamba, uye nokuda kwechikonzero chakanaka. The rusununguko kuva zvose zvauinazvo kumusana kwako uye hopping kubva chitima kurovedza uye nyika kuti nyika ndiyo Zvaifadza chaizvo. Sezvo ava dzakakurumbira saka, takafunga kuti kukupa pakufamba backpacking mazano nokuti kufamba nezvitima.
Ngatitangei nepatinokurudzira kuti uende tisati takupa zvedu War mazano nokuti kufamba nezvitima.
Trip pfungwa 1: London kuna Amsterdam
chinguva: 23 mazuva
The Lineup: Rome, Viareggio (Tuscany), Venice, Vienna, Budapest, Krakow, Prague, Berlin, Amsterdam, kushandiswa, London
Trip Suggestion 2: London kuna Istanbul
chinguva: 25 mazuva
The Lineup: London, Paris, wekuLausanne, Zermatt, Chur, Munich, Salzburg, Vienna, Budapest, Sighisoara, Brasov, muBucharest, Veliko Tarnovo, Sofia, Plovdiv, Istanbul
Route Highlights: Eiffel Tower, Luxembourg Gardens, Lake Geneva, Swiss Alps, Neuschwanstein Castle, Dachau wevasungwa, Buda Castle, chafariz namabhati muBudapest, The Black Church, ari Palace Paramende, Church of Wokuzvarwa, Alexander Nevski chechi, Mukuru Bazaar, St. Sophia.
Zurich kuna wekuLausanne Zvitima
Geneva kuna wekuLausanne Zvitima
Bern kuna wekuLausanne Zvitima
Lucerne kuna wekuLausanne Zvitima
1st Sarudza yedu war mazano: Pack Light!
Nepo Pfungwa kutakura zvakawanda pamusoro ako musana asingadi seyakanaka, zviri nyore kuti pamusoro rongedza paunenge kuwana kufara pamusoro rwendo yako! Chekutanga, taura zvakanaka kubhegi iro rinotsvedza uye panzvimbo tora hombodo yakagadzikana iyo inoputira muchiuno chako kuti utsigirwe. kana kurongedza, zvibvunze: 'Ndinoratidza kwazvo vanoda ichi?'Kana mhinduro iri hapana, gomba nacho! Kunyange nani kana iwe unogona kumhanya uye pasi masitepisi kakati - ichi uchakupa chiratidzo sei zvauchasangana kushandisa kana uri kumhanya vanonoka kuti chitima uye vanofanira kumhanya kubata nayo!
muromo 2: Ita The Rail Planner App shamwari yako yepamoyo.
Anwendung ichi Downloads ose chitima purogiramu zviende foni yako kuitira kuti unogona kuwana navo is uye kunokosha nokuda kwenyu war mazano! Izvo zvakakwana pakuronga nzendo dzako paunenge uchienda uye uchinakidzwa nenguva yako mune nyowani, vatorwa nzvimbo. wo, ari Anwendung unokubvumira dzinobvisa rako yokudadira nzira pachishandiswa zvakananga kwokubatana chete, nezvitima pasina rokumanikidzirwa kuchengetedza, uye kudzidzisa ane bhasikoro chekufambisa. Kunyange zvazvo isu hatingavatengeri hunoratidza kutora bhasikoro pamusoro war rwendo!
Dortmund kuna muFrankfurt Zvitima
MuNuremberg kuna muFrankfurt Zvitima
Stuttgart kuna muFrankfurt Zvitima
Bonn kuna muFrankfurt Zvitima
muromo 3: Regai kusanganisa kukwira spontaneity pamwe vari vasina kurongeka!
Yose pfungwa war mazano ndiko kuva rusununguko kufamba kutsanya, kurerutswa, uye kudiwa asina hanya munyika! Kana iwe vanoguma kutenga njanji zvichipfuura, uchaita mari, asi kana ukapotsa chitima yako, unogona kutanga pricey. saka, whey kumusoro zvaunoda kuita uye zvipe kwakanaka nguva yakawanda yokuita izvozvo. Kutenga matikiti pachine achaponesa iwe mari asi kukutadzisa mukana wokushandiswa yako.
KuCologne muNuremberg Zvitima
Munich kuna muNuremberg Zvitima
Stuttgart kuna muNuremberg Zvitima
Dortmund kuna muNuremberg Zvitima
muromo 4: Last war Mazano – Ramba chakaoma vachipiwa masokisi pedyo mumaoko
The yakanakisisa navi war mazano dzinobva pauzima. Hapana hunoparadza rimwe zuva rakaita nyoro masokisi, kunyanya kana uri wandinofanira kufamba madaro marefu. Kuwedzera nokutuka kukuvara, wechipiri kutombonaka zviitike haasi kukwanisa kunyange kuwana masokisi paunenge chaizvo kubatsirwa navo! Izvi kunoguma kubudisa imwe apiwa chiputiriso. Chinhu hapana anoda kuita! zviitiko Vose havana kunakidza, saka chengeta yakaoma peya muhomwe pedyo pamusoro bhegi rako. kuti nzira, kana zvichiitika kufamba chaimo kuti hofori gandwa, wako anogadzirisa pedyo ruoko.
Kuti uwane yakanakisa chitima ruzivo kana uchinge waenda shure, panguva naka mitengo uye pasina Réservation yechikoro, shandisa Save A Train, uye musakanganwa kuti kudhinda kwedu kufamba war mazano usati kudzidzisa pakufamba.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-backpacking-tips%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#Backpacking #BackpackingTips europeantravel europetravel longtrainjourneys chitima mazano Train Travel chitima rwendo